हामीले दिने शिक्षाले स्वरोजगारका अवसर प्रदान गर्नेछ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / हामीले दिने शिक्षाले स्वरोजगारका अवसर प्रदान गर्नेछ
हामीले दिने शिक्षाले स्वरोजगारका अवसर प्रदान गर्नेछ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता October 5, 2017	0 150 Views
डा. जीवराज आचार्य
प्रमुख– स् वर्णिम देउखुर ी क्याम्पस
बदलिदो युगको आवश्यकता अनुसारको संसारभरि नै प्रतिस् पर्धा गनेर् है सियत राख्ने स् तरको शिक्षा स् थानीयस् तरमा बदलिदो युगको आवश्यकता अनुसारको संसारभरि नै प्रतिस् पर्धा गनेर् है सियत राख्ने स् तरको शिक्षा स् थानीयस् तरमा उपलबध हुनुपनेर् हुन्छ । समयानुकूल प्रदे शको शै क्षिक आत्मनिर्भरता आजको प्रमुख आवश्यकता हो  । यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गदैर् शिक्षा क्षे त्रमा लामो समय व्यतित गरिसक्नुभएका डा. जीवराज आचार्य काठमाडौ ं र संयुक्त राज्य अमे रिकामा अध्ययन र लामो समयसम्म अध्यापन गरी हाल दाङ जिल्लाको लमही क्षे त्रलाई आफ्नो कार्यक्षे त्र बनाउन लागिपर्नुभएको छ  । व्यवस् थापन संकायको स् नातक तहको कले जको शै क्षिक र प्रशासनिक जिम्मे वारीसहित नया“ व्यवस् थापनका साथ सञ्चालनमा आएको स् वर्णिम क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ । नया“ युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरे ले डा. आचार्यस“ग गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । – सम्पादक
आजभो लि के गदैर् हुनुहुन्छ ?
स् वर्णिम दे उखुरी क्याम्पस लमही दे उखुरीमा क्याम्पस प्रमुख तथा प्रमो टरको है सियतमा काम गदैर् छु  । यस बाहे क शिक्षा र सामाजिक क्षे त्रमा उल्ले ख्य कार्य गनेर् के ही संघसंस् थामा पनि आबद्ध छु्र ।
दे उखुरी क्षे त्रको लमहीमा स् वर्णिम दे उखुरी क्याम्पस नया“ व्यवस् थापनका साथ सञ्चालन भएको कुरा सुनिएको कुरा सा“चो हो ?
हो  । त्यसै को परिणाम नै मे रो उपस् िथति हो  । हिजो एकजना शिक्षालाई माया गनेर् सरले मे हनत गरे र चलाइरहनुभएको थियो  । अब आजको युगको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी नया“ परिवे शमा विद्यार्थीलाई चुस् त व्यवस् थापन गदैर् परिभाषित उद्दे श्यलाई आत्मसात गदैर् अगाडि बढ्दै छांै  ।
स् वर्णिम क्याम्पस सञ्चालन गर्नुका उद्दे श्यहरू के हुन् ?
हरे क दिन दे शले परिवर्तन खो जिरहे को छ । संसार विभिन्न माध्यमबाट एकै ठाउ“ जो डिएको छ  । दे श प्रादे शिकीकरण भइरहे को छ  । अब हामीले प्रदे शलाई, जिल्लालाई, सारमा स् थानीय निकायलाई शिक्षामा आत्मनिर्भर बनाउनुपरे को छ । हरे क क्षे त्रमा सफलता पाउनका लागि व्यवस् थापन तथा सामाजिक र आर्थिक उन्नतिको आधार कृषि लगायत अरू विभिन्न क्षे त्र छन् । यिनलाई चाहिने आवश्यक प्रविधि स् थानीयस् तरमै उपलब्ध हुनुपनेर् आवश्यकतालाई मनन गदैर् सो को पूर्वाधार निर्माण नै यस क्याम्पसको प्रमुख उद्दे श्य हो  ।
कस् तो शै क्षिक जनशक्ति उत्पादन गनेर् लक्ष राखिएको छ ?
हामी चाहन्छौ ं, विद्यार्थीले एउटा शै क्षिक तह सम्पन्न गरिसके पछि त्यो तहको सै द्धान्तिक ज्ञानको साथै त्यसको प्रयो गात्मक र व्यवहारिक पक्षसमे त बलियो हो स् । परिणामस् वरूप विद्यार्थीहरू आफूले चाहे को स् थान र संस् थामा जागिर अथवा व्यवसायमा
पूर्ण सफल रहुन् । दे श र समाजलाई आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गनेर् लक्ष यस क्याम्पसको छ  । उच्च शिक्षाका लागि
हो स् या अनुसन्धान या रो जगारका लागि औ पचारिक शिक्षास“गै क्षमता अभिबृद्धि गनेर् , तालिम दिने लक्ष राखिएको छ  । हामी विश्वास गर्दछांै कि हाम्रो यो जना अनुसारको शिक्षाले रो जगार तथा स् वरो जगारका यथे ष्ट अवसर प्रदान गनेर् छ  । स् वर्णिम दे उखुरी क्याम्पसको नितान्त कुरा गर्दा हामी व्यवस् थापनका सै द्धान्तिक पक्ष र व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिदै आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण, से मिनार तथा गो ष्ठीबाट विद्यार्थीलाई सुसज्जित गराउ“दै अघि बढ्ने छौ र सम्पूर्णरूपमा चाहे को क्षे त्रका लागि सफल प्रतिस् पर्धी निर्माण गनेर् लक्ष छ  ।
प्रसंग बदलौ ं । दे उखुरीको शै क्षिक अवस् थालाई यहा“ले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
आज भन्दा ३० वर्ष अघि मावि वनगाउ“बाट एसएलसी पास गरे को हु“ मै ले  । यस क्षे त्रको शै क्षिक पृष्ठभूमिबारे म राम्रो स“ग अवगत छु । यद्यपि यहा“का नागरिकहरूको आर्थिक र शै क्षिकस् तरमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । परिणामस् वरूप सो चाइमा पनि परिवर्तन आएको छ  । शिक्षाको महत्व अब किसान र उद्यमी सबै लाई प्रष्ट भएको छ । यो अवस् थामा यहा“का विद्यालयबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरे पछि उपयुक्त उच्च शिक्षा लिने निकाय नहु“दा जिल्ला छो डी जानुपनेर् बाध्यता छ  । बाहिर जा“दै मा शिक्षाको मुहानै खुल्छ भन्ने पनि छै न । अकोर् तर्फ यो क्षे त्र उद्यो गको लागि र स् वःव्यवसायको लागि यातायात र सिंचाईका कारण उपयुक्त मानिन्छ  । कृषिका लागि त यो अति उत्तम नै भयो  । यति धे रै सम्भावना भएको ठाउ“मा उपयुक्त जनशक्ति निर्माण हुन सके को छै न । सामुदायिकरूपमा सञ्चालित बाहे क व्यवस् थापन अध्ययन गराइने अकोर् निकाय नभएको अवस् था छ । कृषिको लागि स् थानीय जनशक्ति निर्माण हुन सकिराखे को छै न । भएका के ही संस् थामा पनि प्रविधियुक्त शिक्षा दिन नसकिरहे को अवस् था छ  ।
दे उखुरीमा शै क्षिक क्षे त्रका समस् याहरू के –के दे ख्नु भएको छ ?
सबै क्षे त्रका आ–आफ्ना विशे षता र विशिष्टता हुन्छन् र यहा“ पनि छन् । यो क्षे त्रका अभिभावकहरू अधिकांश किसान हुनुहुन्छ । आफ्ना सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चे तना त छ तर कहा“, के ,
किन, कस् तो जस् ता प्रश्न गर्न, बुझ्न अलि गाह्रो छ, त्यो स् वाभाविक हो  । अलिकति यो क्षे त्रमा चे तना अभिबृद्धि पनि आवश्यक दे ख्छु  । आफ्नो सन्तानलाई पढाउनु पर्छ भन्ने किसान अभिभावकहरूमा भएको चे तना सकारात्मक हो । समय बलवान छ । यहा“ अत्यन्त जागरुक, शिक्षा र यसका विविध पक्षहरू राम्रो स“ग बुझे का अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ । अरू क्षे त्रमा जस् तै यहा“ दे खिएको अकोर् प्रमुख समस् या हो विद्यार्थीको लहडमा निर्णय गनेर् बानी । उमे रको प्रभाव पनि हुन्छ ।
अवसरहरू नि ?
यहा“ आवश्यकता, अवसर र कठिनाइ सबै छन् । यो क्षे त्र मै ले पहिले नै भने जस् तै उल्ले ख्यरूपमा औ द्यो गिक र कृषिको अत्यन्त सम्भाव्य क्षे त्र हो  । के ही वर्षमै ५ नं. प्रदे शको सम्पन्न र स् वावलम्ब क्षे त्र हुने छ दे उखुरी । शिक्षामा आन्दो लन नै हुने छ  । निजी क्षे त्रका लागि समे त उर्वर भूमि हो दे उखुरी । व्यावसायिक दृष्टिको णले मात्र हो इन, सामाजिक र सांस् कृतिक हिसाबले पनि सम्पन्न छ । समाजलाई दिने कुरा धे रै छ यहा“ । जहा“ दिने कुरा हुन्छन्, पाउने कुरा पनि प्रशस् त हुन्छन् ।
शिक्षा क्षे त्रको विकास कसरी हुनुपनेर् हो ?
मे रो विचारमा त्यो शिक्षाको कामै छै न जसले कुनै न कुनै प्रकारले व्यावहारिक ज्ञान दिदै न । औ पचारिक शिक्षाले शिक्षाको एउटा तह परिभाषित गर्छ । अध्ययन गरे का सै द्धान्तिक पक्षलाई व्यवहारमा ल्याएर जीवन सफल र सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ  । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा हामी कहा“ छौ ? स् कूल र कले जहरूले कस् तो शिक्षा दिइरहे का छन् भन्ने कुरा यही धरातलमा बसे र मूल्यांकन ग¥यो भने तपाइ“को प्रश्नको जवाफ त्यहीं भे टिन्छ । यहा“ एस एलसीदे खि विद्यावारिधिसम्मका शिक्षित बे रो जगार भे टिन्छन् । जुन त्यही किताबी र सै द्धान्तिक ज्ञानभन्दा माथि शिक्षा उठ्न सके न । स् कूलदे खि नै विद्यार्थीलाई सै द्धान्तिकको साथै त्यो शिक्षाको प्रयो गात्मक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखे र सिकाउ“दै कुन विषय र विधाको उपयो ग र महत्व कुन क्षे त्रमा छ र त्यसको लागि कसरी व्यावहारिक ज्ञान लिन सकिन्छ भन्ने अवगत निरन्तर गराउनुपर्छ । अकोर् नभई नहुने पाटो हो , अनुशासन र व्यावसायिकता  । दिनानुदिन जसरी इन्टरने ट र टे लिभिजनले सिंगो संसारलाई नजिक ल्याएको छ । त्यसै गरी संस् कृति पनि दिनानुदिन धराशायी ह“ुदै गएको छ । हामीले शिक्षा दिदा यो पक्षमा समे त ध्यान दिनुपनेर् हुन्छ  । आज विभिन्न निजी क्षे त्रबाट सञ्चालित विद्यालयले वार्षिक परीक्षामा शतप्रतिशत परिणाम ल्याउन सफल त छ तर त्यहा“ खासगरी काठमाडौ ंमा र के ही बाहिर पनि १२ कक्षापछि उच्च शिक्षाका लागि ने पाल हो इन, अमे रिका र युरो प छान्ने , ने पाल र ने पालीको संस् कृतिलाई हे यको दृष्टि राख्ने समे त प्रवृति छ  । यसलाई पनि ध्यान दिदै काम गर्नुपनेर् छ  । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति सचे त नभई घर र राष्ट्रप्रति जिम्मे वार नागरिकहरु निर्माण हु“दै नन्  ।
शै क्षिक क्षे त्रको विकासका लागि कसले के गर्नुपर्ला ?
एउटा नीतिगत पाटो सरकारको हुन्छ र उपयुक्त नीति, नियम तथा शिक्षाका आधारभूत मूल्य र मान्यता तय गरिनुपर्दछ । यसरी मूल्य र मान्यता तय गर्दा निजी तथा सार्वजनिक क्षे त्रमा कार्यरत सबै लाई समे टी व्यापक छलफल गरी तय गरिनुपर्छ  । अनि कार्यान्वयन पक्ष अकोर् महत्वपूर्ण पक्ष हो  । शिक्षाकर्मीको निष्ठा र इमानदारिता अनि शिक्षण संस् थानहरूको नियत र यो जनामा समे त भर पर्छ  । उपयुक्त अनुगमन अकोर् महत्वपूर्ण पक्ष हो  । आ–आफ्नो ठाउ“बाट सबै को दायित्व हुन्छ । सरकारी लगानी, निजी क्षे त्रको लगानी र सो च सबै को संयुक्त प्रयास जरुरी दे खिन्छ  ।
अन्त्यमा के ही भन्न छुटे को भए ?
छुटे को त खास छै न । तर भन्ने र बहस गनेर् कुरा धे रै छन् । अब म आफ्नै भूगो लमा जिल्लामा के ही गरौ ं भन्ने सो चले आएको र विभिन्न दे शका शै क्षिक कार्यक्रमहरूको ज्ञानको साथै व्यवस् थापनको अनुभवसहित यहा“ आएको छु  । शिक्षामा हामी मात्र छै नौ ं । यो क्षे त्रमा कार्यरत र अनुभवी सबै स‘“ग बहस र छलफल गदैर् परस् पर सहयो ग र सहकार्य गदैर् अघि बढ्ने रहर र चाहना दृढ छ  । त्यसै ले सम्बन्धित सबै लाई अनुरो ध गर्दछु कि आउनुहो स्, हामीलाई बो लाउनुहो स्, बसांै , छलफल गरांै । यस क्षे त्रमा शिक्षामा नया“ आयाम ल्याऔ ं । अन्त्यमा, तपाइ“ र तपाइ“को राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनु भएको मा धन्यवाद  ।
Previous: शिशु र आमालाई रोगबाट मुक्त बनाउन जोड
Next: भाउजु जिस् काएको झो कमा हत्या